4 waxyaabood oo faa'iido leh oo aad ku samayn karto Digital Crown on AirPods Max | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/4 waxyaabood oo faa'iido leh oo aad ku samayn karto Digital Crown ee AirPods Max
4 waxyaabood oo faa'iido leh oo aad ku samayn karto Digital Crown ee AirPods Max
AirPods Max waa aaladda labaad ee Apple si ay u aqbasho Apple Watch's Digital Crown. Waxaana laga yaabaa inaad la yaabto sida uu u awood badan yahay badhankaas yar, laga bilaabo hagaajinta mugga ilaa la xakameeyo dib-u-ciyaarka.
Halkan waxaa ah afar shay oo faa'iido leh oo aad ku samayn karto Digital Crown ee AirPods Max.
Crown-ka dhijitaalka ah waxa laga yaabaa in aanu u ekaan wax badan, laakiin Apple Watch waxa uu ina baray in Apple uu ku samayn karo waxyaabo xariif ah iyada oo la adeegsanayo hal badhan oo wareeg ah. Iyada oo ku xidhan waxaad samaynayso, waxay maamuli kartaa wicitaanadaada, u yeedhi kartaa Siri, iyo in ka badan.
Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida saxda ah ee loo isticmaalo.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan uguna faa'iidada badan ee aad rabto inaad ku samayso Digital Crown ee AirPods Max waa hagaajinta mugga wax kasta oo aad dhagaysato. Si fudud u wareeji taajka si aad u kordhiso ama u yarayso.
Sida caadiga ah, u wareegista dhinaca saacada waxay kordhin doontaa mugga warbaahinta oo u wareega saacada ka soo horjeeda ayaa hoos u dhigi doonta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad bedeli kartaa goobahan adigoo raacaya tillaabooyinkan:
Hubi in AirPods Max ay ku xidhan yihiin iPhone ama iPad kaaga.
Taabo i badhanka ku xiga AirPods Max.
tubada Digital Crown.
Under Kordhi Mugga Adigoo Wareegaya, midna dooro Ku laabo Hore or Hore iyo gadaal.
Crown-ku waxa uu diiday baahida lagu hagaajinayo mugga iPhone kaaga, iPadka, ama Mac laftiisa, kaas oo aad waxtar u leh marka aad socoto oo qalabkaagu aanu si sahal ah loo heli karin. Inkasta oo aad isticmaali karto Apple Watch samee sidaas oo kale.
Xakamee dib u ciyaarista warbaahinta
Waxaa laga yaabaa inaad ka warqabto inaad ciyaari karto oo aad joojin karto warbaahinta adigoo riixaya Digital Crown hal mar. Laakiin ma ogtahay inaad sidoo kale u isticmaali karto inaad ka boodo raadadka? Kaliya qiime laba jeer si aad hore ugu booddid oo taabo saddex jeer si aad dib ugu booddo.
Waxaad u yeeri kartaa Siri adigoon wax badhammo ah ku lahayn AirPods Max adigoo leh amarka "Hey Siri". Laakin, haddii sabab kasta oo aan shaqaynayn, waxaad gacanta ku heli kartaa dareenka Siri adiga oo riixaya oo hoos u dhigaya Taajka Dijital ah.
Ma heshay wicitaan soo socda? Uma baahnid inaad iPhone-kaaga jeebkaaga kala baxdo si aad uga jawaabto. Taabo Digital Crown hal mar AirPods Max si aad uga jawaabto wacitaanka, ama laba jeer taabo si aad u diido.
Haddii aad hesho wicitaan labaad intaad taleefoonka ku jirto, adigoo riixaya Digital Crown ayaa hal mar ka jawaaba oo ku dhejinaya wicitaanka ugu horreeya. Waxaad markaa riixi kartaa Digital Crown laba jeer si aad u joojiso wicitaanka labaad oo aad dib ugu noqoto.
Si aad u diido wicitaanka labaad ee soo gala, si fudud u taabo oo hay Digital Crown. Iyo inta aad leedahay wicitaan firfircoon (kadib markii laga jawaabo), adigoo riixaya Digital Crown laba jeer waxay ka diri doontaa AirPods Max una diri iPhone.
Sidee loo dami karaa soo dejinta Roposo?
Doorashada KPI-yada ugu wanagsan ee ganacsigaaga: Waxa la tixgeliyo iyo sida loo xoojiyo cabbirkaaga ugu muhiimsan